तपाईंले यि १० गल्ती गर्नुभएको त छैन, जवानीमै बूढो बनिएला ! - नेपाली खोज
तपाईंले यि १० गल्ती गर्नुभएको त छैन, जवानीमै बूढो बनिएला !
बिहान देखि बेलुकासम्म कतिपय अवस्थामा हामीले यस्ता गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ जसले स्वास्थ्यमा ग’म्भीर असर पारिरहेको हुन्छ । यस्ता सामान्य गल्तीले हाम्रो छालामा प्रभाव पार्दछ जसकारण हामी कम उमेरमै बूढो देखिन थाल्छौँ । हाम्रो अनुहारमा आउने पिम्पल, चाउरीपना, पोतो र छाला सम्बन्धी अन्य समस्याले सिधै हाम्रो उमेरलाई बढाइदिन सक्छ । यदि हामीले त्यस्ता गल्तीप्रति ध्यान दियौँ भने आफ्नो छालालाई जवान राख्न सक्नेछौँ ।
नशाको लतः न’शाको लत लागेका मानिसको शरीरमा कार्टिसोल नामक ह’र्मोन बन्न थाल्छन् । यसले तनाव बढाउँछ र समयभन्दा पहिले नै मािनस बूढो देखिन थाल्छ ।
एकैसाथ धेरै काम: एकैसाथ धेरै काम गर्दा हाम्रो धेरै ऊर्जा सकिन जान्छ । यसका साथै यसले कामको चापलाई बढाउँछ र त’नाव हुन थाल्छ । यसका कारणले दिमाग र हृदयमा नराम्रो असर पर्छ
निद्रा: अनुसन्धानले यो पुष्टी गरिसक्यो कि रातिको समयमा ७ घन्टा सुतेन भने यसले त’नाव, हृदय सम्बन्धी रो’ग र र’क्तचापमा सम’स्या पैदा गराउँछ ।
सम्बन्धमा तना-वः लगातार त-नाव बढ्ने गर्यो भने हाम्रो शरीरमा त्यस्ता हर्मोनहरु उत्पादन हुन्छन् जसले स्वास्थ्यलाई हा’नि पुर्याउँछ र तना’व बढाउँछ । यसका कारणले हाम्रो छालामा समयभन्दा पहिले नै चाउरीपना आउन थाल्छ ।
पोषणयुक्त खाना: हाम्रो शरीरलाई पर्याप्त पोषण दिने दूध, पनिर, हरियो सागसब्जी, अन्डा, माछा, मासु जस्ता खानेकुरा अत्यन्तै आवश्यक छन् । दैनिक खाने कुराहरुमा यी खानेकुरा पनि सेवन गर्नुपर्छ । किनकी जरुरी पोषण नपाउँदा शरीर चाँडै कमजोर भएर बूढो देखिन थाल्छ ।
पानी कम पिउनेः दिनभरिमा ७ देखि ८ गिलास भन्दा कम पानी पिउँदा शरीरमा पानीको कमी हुन्छ जसले छालामा सुख्खापना बढाउँछ । छाला सुख्ख हुँदा चाउरीपनाको सम’स्या देखा पर्छ । एजेन्सी
कर्णाली, २६ माघः निजी वायु सेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्सले काठमाडौँ–सुर्खेत विमानस्थलमा परीक्षण उडान शुरुआत गरेको छ । काठमाडौँ–सुर्खेत सिधा परीक्षण उडान शुरु गरेको श्री एयरलाइन्सको ८० सिट क्षमताको क्युआर–८०० जहाजले आज बिहान १०ः३५ मिनेटमा धावनमार्गमा अवतरण गरेको नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख उमेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले २० देखि २२ डिग्री सेल्सियस तापक्रमसम्म क्षमताअनुसारको लोड ल्याउन सकिने चालकले जानकारी गराएको बताउनुभयो । कार्यालय प्रमुख पन्थीका अनुसार जहाँजका लागि रनवे उपयुक्त रहेको तर नियमित उडानका लागि श्री एयरलायन्स कम्पनीले बजारको अवस्था अध्ययन गर्ने बताएको छ । (रासस)
भन्सार छली ल्याएको सुर्तीसहित बोलेरो जिप बरामद